Sidee ku dhacday qabashada wiil Soomaali ah oo isku ekeysiiyay Haweenay? - Radio Risaala: Somali News Online
Home Wararka Sidee ku dhacday qabashada wiil Soomaali ah oo isku ekeysiiyay Haweenay?
Hadal heyn badan ayaa ka dhalatay Muwaadin Soomaaliyeed oo lagu Magacaabo Ibrahim Maxamed oo lagu qabtay garoonka diyaaraddaha caasimada dalka Turkiga.
Muwaadinkaan ayaa qorsheeyay in uu ku aado si sharci darro ah Boqortooyada Ingiriiska.
Ninkan dhalinyarada ah ee Soomaaliyeed ayaa ku sugnaa garoonka diyaaradaha Esenboğa ee caasimada Turkiga ee Ankara bishii Febraayo 12, isagoo haysta dukumintiga safarka iyo sharciga degenaanshaha ee Khadija Haaji.
Ibraahim Maxamed markii uu u yimid kormeerayaasha Baasaboorka si uu ugu raaco duulimaadkiisa London ayaa la qabtay.
Ninkaan waxaa diyaar u ahaa waxwalba oo u sahli karay in uu matalo haweenay sida jaakad dhaadheer, jaakad dhogorta ka samaysan iyo xijaab ciriiri ah.
Eedaysanaha ayaa runtii u eg naagtii laga sawiray dokumentiyada, laakiin bilaysku waxay ka shakiyeen waxyaabo badan oo ay ka mid yihiin isqurxinta iyo socodka.
Saraakiisha booliiska ayaa markaa kadib baaray muuqaalka sawirada kaameeraha amniga si ay u ogaadaan in haweeney u timid inay dhiibto dukumiinti safarka ah tuhmanaha. Bilayska ayaa ku tuhmay tuhmanaha inuu ka saaro madax-gashiga oo uu nadiifiyo qurxiyo inta ay baarayaan asalka ka dibna waxaa soo baxday in uu yahay nin.
Ibraahim Maxamed ayaa soo galay dalka Turkiga Bishii September 2019.
Khadija Haaji oo aheyd Saaxiibada wiilka la qabtay ayaa sidoo kale la qabtay xilli ay isku dayday inay ka duusho garoonka diyaaradaha. Labadaba waxaa hada lagu hayaa xabsi.
Previous articleDHAGEYSO: Warka Subax 15-2-2020
Next articleSoomaaliya oo markale ka dalbaday Kenya qabashada Wasiir Janan